Semalt Expert momba ny Infekty, Spyware sy ny Malware Security Guide
Malware (fandaharana ho an'ny fandaharana malefaka) dia fangatahana natao hampidirana na hamelezana ny PC raha tsy misy ny fankatoavanao. Malware dia mirakitra kankana, PC infections, kintana angano, spyware, scareware ary izany no tendron'ny iceberg. Azo alaina ao amin'ny tranokala sy hafatra na rakitsoratra ao anaty antontan-taratasy Download izany - мягкое похудение.
Ny fomba fanao tsara indrindra hifehezana ny tsy fahampian-tsakafo dia ny fanaovana fihetsika mety amin'ny fiarovana amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana, manao fitaovana fandefasana amin'ny spyware, misoroka amin'ny fanindriana ny fifandraisana amin'ny mailaka na tranokala. Tahaka izany angamba, ireo mpanakanto mpihetsiketsika dia sarotra: ny malware amin'ny ankapobeny ankehitriny dia misy sary vetaveta amin'ny mailaka avy amin'ny mpiara-mitory na tranonkala manampy. Eny fa na dia ireo mpampiasa Internet aza dia mety hahazo viriosy haingana na ho ela.
Amin'ny fotoana tsy voafetra ataonao, dia misy fandaharan'asa fitsaboana maimaim-poana azo atao mba hahafahanao miala amin'izany. Igor Gamanenko, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia mitanisa ambany vitsivitsy.
Mivezivezy ianao, ary misy sary manjavona mipoitra tampoka miseho ary manamarika fa misy olana eo amin'ny solosainao, ohatra hoe: 'Ny PC ianao dia mety ho voapoizina amin'ny fampiasana spyware maloto. Ilaina ny fandroahana haingana. Raha te-handinika ianao, tsindrio ny 'Yes'. Tsy fantatrao na tena izy na tsia, ary inona no fomba fiasa azonao?
Manara-maso ny horonan-tsary izy ary manangona angon-drakitra momba anao, ny solosainao ary ny fandrobana tsy misy dikany raha tsy misy ny fanambaranao - amin'ny ampahany betsaka, mba hampandrosoana ny tanjona. Azo atao koa ny manangona angon-drakitra avy amin'ny sora-tanana amin'ny adiresinao ary na dia ny teny fanalahidy aza.
Fampiharana malware izay afaka mamerina mamaky sy mamaky PC maro samihafa.
Ny programa manaraka dia mihazakazaka tsy an-kijanona, manakana ny PC tsy ho voaloto.
Sarimihetsika maimaim-poana iray antonontonona manohitra ny spyware, manohitra ny rootkit sy ny fiarovan-tena matanjaka.
Manohitra ny fampiharana amin'ny finday avy amin'ny Grisoft izay miaro ny PC amin'ny otrikaretina amin'ny alàlan'ny fanomezana fanafody mahomby amin'ny informatika sy ny fiarovana.
Manome fiarovana mitoetra ho an'ny solosainao izay miaro amin'ny aretina, spyware, ary ny fampiasana maloto.
Manamboara sehatra azo antoka ao amin'ny PC anao mba hahazoana tranonkala azo antoka amin'ny fampiasana ity fampiharana maimaim-poana ity. Ity dia fitaovana mahagaga ho an'ny mpanjifa lavitra kokoa novolavola.
Atombohy amin'izay ny safidy hampidirana ny programa vao haingana izay mamelombelona ny rafitra miasa aminao. Ireo matetika dia mampiditra fanavaozam-baovao momba ny fiarovana sy antoka ho fanampiana ny gadget. Mipoitra amin'ny fomba ofisialy? Amboary io.
Fitaovana SPYWARE / famoahana
Ity fampiharana manaraka ity dia mamakafaka ny rafitra misy anao amin'ny malware, ka manimba izay loto rehetra mety ho hitanao.
Ny mpamono olona malaky maimaim-poana izay mitifitra ny rootkits, kankana, spyware, parasites, ary adware.
rindrambaiko manan-kaja sy mahomby izay manaiky sy manilika piraofilina sy malware amin'ny PC anao.